जनताको आवाजः काम हेरेर अनुदान दिनु त गजब होनि (अडियोसहित) – Online Jagaran
जनताको आवाजः काम हेरेर अनुदान दिनु त गजब होनि (अडियोसहित)
१७ भाद्र २०७५, आईतवार ००:२९ September 2, 2018 जागरण
सुर्खेत, १७ भदौ (जागरण) । कर्णालीमा प्रदेश सरकारले किसानहरुलाई उनीहरुले गरेको उत्पादन र लगानीका आधारमा अनुदान दिने भएको छ । शुरुमा अनुदान दिँदा उत्पादन नहुने र अनुदान दुरुपयोग हुने समस्या आएपछि प्रदेश सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यसै सन्दर्भमा सहकर्मी नन्द कठायतले किसानले गरेको उत्पादनका आधारमा मात्र उनीहरुलाई अनुदान दिने प्रदेश सकारको योजना तपाईँलाई कस्तो लाग्यो ? भनेर सोध्नुभएको छ । सुन्नुस् जनताको आवाज जस्ताको त्यस्तै (अडियो) ।
आन्तरिक स्रोत जुटाउन धौः आठविस नगरपालिका प्रमुख उपाध्याय (अडियोसहित)
सुर्खेतमा पहिलोपटक दृष्टिविहीन क्रिकेटः शिखर मावि विजयी
तीन महिनाभित्र भारतबाट कर्णाली भित्रिए २७ हजारभन्दा बढी
२३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०५:२४ June 5, 2020 जागरण
८ श्रावण २०७५, मंगलवार १४:१२ July 24, 2018 जागरण
कर्णाली लगानी सम्मेलनको तयारी कसरी हुँदैछ ? सुन्नुहोस अडियोमा
६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १३:१७ February 18, 2021 जागरण